जाजरकोटका बाख्रापालक किसानको फेरिदै, जीवनशैली – Rara Khabar
जाजरकोटका बाख्रापालक किसानको फेरिदै, जीवनशैली
जाजरकोट, १२ साउन ।
जाजरकोटको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका –४ लहँकी माया रावललाई २ वर्ष अघिसम्म घरखर्च चलाउन निकै हम्मेहम्मे पथ्र्यो । आयआर्जन नहुँदा घरखर्च चलाउन समस्या भएपछि मायाका श्रीमान कालापहाड जानु हुन्थ्यो । तर बाख्रापालन व्यवसाय थालेपछि अहिले मायाको जीवनमा निकै ठुलो परिवर्तन आएको छ ।
आयोजनाको सहयोगवाट बनेका खोरको बारेमा पुशचिकित्सक डा. विष्णु धिताललाई जानकारी नागरिक कृषि तथा पशपालन सहकारी संस्थाका सचिव कमान ओली ।
गाउँकै नागरिक कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थामा आवद्ध मायालाई उच्च मुल्य वस्तु विकास आयोजनाले बाख्रापालनको लागि सहयोग गरेपछि अहिले उहाँको अवस्था फेरिएको हो । अहिले मायाले पालेका बाख्राले आँगन भरिसकेको छ । उहाँ आजभोली तीनै बाख्राको स्याहार सुसारमा व्यस्थ हुनुहुन्छ । बाख्रा बेचेर आएको पैसाले घरखर्च चलाउदै आउनु भएको छ । पैसाको लागि ऋण सावट गर्नु परेको छैन, मायाले भन्नुभयो, बाख्रा पालेरै छोरालाई अहेव पढाएकी छु ।
बाख्रा थालेपछि छोराछोरी पढाउन र घरखर्च चलाउन निकै सजिलो भएको छ, मायाले भन्नुभयो, आयोजनाले २८ हजार रुपैया अनुदान दिएको थियो, त्यो रुपैयाले आधुनिक खोर निर्माण गरे । पहिल पनि बाख्रा त पालेकै थियौ तर कसरी पाल्ने थाहाँ थिएन, तालिम लिएपछि सवै कुरा थाहाँ भयो, हामीले त बाख्रा पाल्न र फाइदा लिन जानेकै रहेनछौ । आयोजनाले बाख्रा पाल्न प्रेरणा मात्र दिएको छैन, कसरी बाख्रा पाल्ने अनि फाइदा कसरी लिने भनेर ज्ञान पनि दिएको छ । यो वर्षमात्र १७ वटा खसीबोका बेचे । पहिले भन्दा अहिले बाख्रा पनि राम्रा छन ।
खुट्टामा चोट लागेको वाख्राको उपचार गदै पशुचिकित्सक डा. विष्णु धिताल लगायतको टोली ।
स्थानीय खरी जातको बाख्रा पाल्दै आउनु भएकी लहँकै उर्मिला सिह पनि आधुनिक खोर निर्माण गरेर बाख्रा पालनमा जुटनु भएको छ । पाठावाठी, माउ, खसी र बोकालाई छुट्टाछुट्टै राख्ने गरी बनाइको खोर निर्माण गर्न उहाँलाई आयोजनाले २७ हजार रुपैया अनुदान दिएको थियो । व्यवस्थित खोर भएकाले विगतको जस्तो बाख्रामा रोग लागेको छैन, सिंहले भन्नुभयो, खसी बाख्रा बिक्री गर्न बजारको पनि समस्या छैन । खोरमै खसीबोका किन्न ग्राहक आउँछन ।
आयोजनाको सहयोगमा बाख्रापालन कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमनमा गएको उच्च मुल्य वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतको टोलीसगँ छलफल गदै नागरिक कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था र युवा नागरिक कृषि समुहमा आवद्ध किसानहरु ।
नागरिक कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थामा आवद्ध नानीकला कामीले पनि फोहरसालवाट व्यवसायिक रुपमा बाख्रापालन गदै आउनु भएको छ । बाख्रापालन व्यवसायवाट राम्रो आम्दानी गदै आउनु भएकी उहाँले पनि खोर बनाउँन १९ हजार रुपैया पाउनु भएको थियो । त्यो रुपैयावाट खोर थिएन खोर वनाए, उहाँले भन्नुभयो, खोर नहुँदा घरको भुगभित्र राखेर पाल्थ्यौ, अहिले आधुनिक खोरमा राख्न थालेपछि बाख्रालाई रोग पनि लागेको छैन । आयोजनाले आयआर्जन गर्ने प्रेरणासँगै लगानी गर्ने रकम पनि दियो, त्यसैले सवै गाउँका दिदीवहिनीहरु नयाँ तरिकाले बाख्रा पाल्न कसिएका छन, उहाँले भन्नुभयो ।
बाख्रापालन गर्न थालेपछि पहिलाको जस्तो अहिले पैसाको अभाव छैन, थाप्लाकी हैकली कामीले भन्नुभयो, दुख कम अनि बढी फाइदा हुने देखेर गाईभैसी पाल्न छोडेर व्यवसायिक रुपमै बाख्रा पाल्न थालेका छौ । दुईवर्ष अघिबाट बाख्रा पाल्न थाल्नु भएकी हैकलीले, बाख्राकै आम्दानीवाट जेठो छोरालाई चीतवनमा तीन वर्षे कृषि विषय पढाउनु भएको छ । नागरिक कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था मार्फत आयोजनाले खोर सुधारको लागि रकम दिएको र त्यही पे्ररणाले गर्दा आफु बाख्रापालन व्यवसातर्फ आर्कषित भएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
आयोजनाको सहयोगमा किसानले निर्माण गरेका खोरको अवलोकन गदै उच्च मुल्य वस्तु विकास आयोजनाका बरिष्ठ कृषि अधिकृत चित्रबहादुर रोकाय, पशुचिकित्सक डा. विष्णु धिताल, कृषि अधिकृत सुरेश थापा, युवा समाजसेवी तथा पत्रकार प्रकाश पन्त, उच्च मुल्यमा कार्यरत अमर चन्द लगायतको टोली ।
गतवर्ष त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका –४ भातचिउराका मकरबहादुर रावलका २ दिनभित्र ११ वटा बाख्रा मरे । पिपीआर रोगले बाख्रा मरेपछि उहाँलाई बाख्रा पाल्ने जागर मरेर गयो । खोरमा बाख्रा सकिएपछि निराश बन्नु भएका उहाँको खोरमा अहिले १६ वटा बाख्रा छन । आयोजनाको सानो सहयोगले मेरो सोचाईमा परिवर्तन आयो । फेरी बाख्रा पाल्न थाले विगत कोट्याउँदै भन्नुभयो, बाख्रापाल्ने तरिका नजान्दा समस्या भयो, अहिले धेरै कुरा थाहा पाइसके अव बिगत दोहोरिदैन ।
बाख्रापालक किसानले आफ्नो बारीमा उन्नत जातको घाँस लगाएका छन । उन्नत जातका बोकाहरु ल्याएका छन । सचेतना पनि बढेको छ । तालिम पाएपछि उनीहरु धेरै सजक भएका छन । ‘बाख्रामा कुनै समस्या देखिए परामर्शका लागि तुरुन्त सेवा केन्द्र आउँछन– सेवा केन्द्र दल्लीका प्राविधिक लालबहादुर ओलीले भन्नुभयो– धेरै समस्या भए घरमै बोलाउछन ।
व्यापारीले विक्रीको लागि डोल्पा लिन लागेका खसीबोकाबारे जानकारी लिदै आयोजनाको टोली ।
उच्च मुल्य बस्तु विकास आयोजनाको सहयोगपछि त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाका धेरै किसान यतिबेला बाख्रापालनमा जुटेका छन । बाख्रापालनबाट चोखो आम्दानी लिन सकिने भएकोले उनीहरु यसतर्फ लागेको हुन । विपन्न महिलाहरुलाई आयोजनाले आयआर्जनको लागि बाख्रापालन व्यवसाय गर्न सहयोग गरेको छ । समुह सहकारी मार्फत आयोजनाले ६५ घर किसानलाई बाख्रापालनमा सहयोग गरिरहेको आयोजनाका बरिष्ठ कृषि अधिकृत चित्रबहादुर रोकायले बताउनु भयो । आयोजनाले दुई वटा सहकारी समुहलाई बाख्रापलनका लागि २१ लाख रुपैया अनुदान दिएको छ । त्यो रकमले किसानले नयाँ खोर निर्माण गर्ने, खोर सुधार गर्ने, उन्नत जातका वोका किनेका छन, उहाँले भन्नुभयो । परम्परागत रुपमा बाख्रापालन गदै आएका किसान सहयोगपछि व्यावसायिक बाख्रापालन तर्फ आर्कषित भएका छन ।
आफुले पालेका वाख्राको वारेमा आयोजनाको टोलीलाई जानकारी दिदै किसान ।
उच्च मुल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाका पशु चिकित्सक डाक्टर विष्णुप्रसाद धितालले आयोजनाको सहयोगमा लहँका किसान राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो जाजरकोट बाख्रापलनको लागि सम्भावनायुक्त जिल्ला हो । त्यसैले आयोजनाको सहयोगपछि बाख्रापालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । अहिले व्यवसायिक रुपमा बाख्रापाल्ने किसानको संख्या पनि बढेको छ ।
बाख्रा पालक किसनाले गरेको प्रगतिबारे जानकारी लिन र समस्यावारे बुझनको लागि दुर्गम गाउँ लहँ जानु भएका आयोजनाका बरिष्ठ कृषि अधिकृत चित्रबहादुर रोकायलाई फुलमालाले स्वागत गदै किसान
लहँमा बाख्रापालन कार्यक्रमको लागि पहल गर्नु भएका युवा समाजसेवी प्रकाश पन्तले व्ययवसायिक रुपमा बाख्रा पाल्दै आएका वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उन्नत जातका बाख्रापालन गर्न खोज्ने किसानलाई सस्तो मुल्यमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले किसानलाई समय समयमा विभिन्न किसिमका तालिम दिनुपर्ने, बजारीकरणको लागि सरकारले सहयोग गर्नु र बाख्रापालनका लागि उपयुक्त रहेको नलगाड नगरपालिकालाई बाख्राको पकेट क्षेत्र बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो । लहँमा बाख्रापालनको लागि उच्च मुल्य वस्तु विकास आयोजनाले दुई वटा समुहलाई २० लाख रुपैया अनुदान दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः १२ श्रावण २०७४, बिहीबार १६:१२